TIKTOK ကြယ်ပွင့်၊ ငါတို့၏လူမှုရေးနှင့် 'HIPPIE JACK SPARROW' - ဘုရင်၏ပထမဆုံးသောနေ့စွဲများသည်ဤတွင်ဖြစ်သည်။ - သတင်း
Tiktok ကြယ်တစ်ပွင့်၊ ငါတို့ရဲ့လူမှုရေးနှင့် 'Hippie Jack Sparrow' - ဘုရင်၏ပထမဆုံးပွဲချိန်းတွေ့မှုသည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည်။
သင်တို့ရှိသမျှသည်စောင့်ဆိုင်းနေရသည့်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာပေါင်း ၂၀၀ ကျော်နှင့်နာရီများစွာပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင်ပထမဆုံးဘုရင်၏သွားချိန်းတွေ့ခြင်းမှကျောင်းသား၏အတွေ့အကြုံများသည်နောက်ဆုံးတွင်ဤတွင်ပင်! သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စုံတွဲများကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ချစ်ခြင်းလော၊ သို့မဟုတ် Leave call ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းလား။ အချို့သော King's ကျောင်းသားများအခြေအနေမည်သို့ရှိကြောင်းဖတ်ပါ။
ဂျက်, ရုပ်ရှင်နှင့် Will, ပထဝီဝင်
ဂျက်: ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်မှာထပ်မံဟဲလိုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ KCL တွင်လိင်တူချစ်သူ ၅ ဦး သာရှိသည်၊ ငါ Will ကိုသိပြီးသားဖြစ်သည်။ ဒါဟာမတ်လအစပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ဒီကြီးမားတဲ့ကမ္ဘာ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ မင်းအဲဒီအကြောင်းကိုကြားဖူးလားမသေချာဘူးလား ဒါပေမယ့်ဒါဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ရက်စွဲနှစ်ခုကိုစားပွဲပေါ်ကနေပယ်ဖျက်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပြောခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲဒါကိုလိုက်ဖမ်းဖို့ကောင်းလိုက်တာ! ပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲသည်ပိတ်သိမ်းခြင်း၏အစနှင့်အလွန်နီးကပ်နေပြီဟုကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးမသိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ကမ္ဘာကြီးကိုအဆုံးသတ်မရှင်းမလင်းဖြစ်ခဲ့ရသဖြင့်ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးစိတ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Will: ဂျက်ကိုပထမဆုံးတွေ့လိုက်ရတာကငါတို့ဟာဒဏ္onာရီပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Elephant နဲ့ Castle ဆိုတဲ့ရက်စွဲတစ်ခုမှာရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်တယ်။
မင်းရဲ့ရက်စွဲဟာမင်းရဲ့ပုံမှန် 'type' လား။
ဂျက် - ငါတကယ်တိုးတက်သောဘုရင်မရှိ (တိုးတက်သောဘုရင်) ရှိသည်။ သို့သော်ထိုသို့ပြုခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်အမျိုးအစားမှာအများအားဖြင့်လူပျိုများဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံအိပ်မက်ဆိုးများဖြစ်တတ်သောကြောင့်လူတစ် ဦး ၏ EP ကိုနားထောင်ရန်အကြိမ်များစွာတွေ့ရသည်။ -fi စည်းချက်! ဒါပေမယ့်ငါထက် ၂ လက်မပိုကြီးတဲ့ဘယ်သူ့ကိုမဆိုကျည်ဆန်ယူဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ Will နှစ် ဦး စလုံး၏ကောင်းတစ် ဦး ရောနှောပဲ! သူဟာ Techno မှာအရသာကောင်းပြီးအရသာကောင်းတဲ့ကလပ်ပုံပြင်တွေပါ။ ဒါကြောင့်အလားအလာကောင်းတဲ့အစ။
အလိုတော်: သူကဒါဟုတ်ကဲ့ကျော်ကြားသော TikTok ပါပဲ။
ဂျက်: နေ့စွဲကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ချိန်လုံးစကားပြောလေ့ရှိပြီးမကောင်းသောရက်စွဲပုံပြင်များနှင့် The Crown of Season4(* လိင်တူချစ်သူအားတုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်း) ကဲ့သို့သောဆွေးနွေးရန်ခေါင်းစဉ်များကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ကောင်းစွာနေပြီးအဆင်မပြေမှုကကျွန်ုပ်၏ဝိုင်ဖိုင်ဖြတ်လိုက်မှသာဖြစ်မည်၊ ထိုအချိန်တွင်ဝိုင်နီအနည်းငယ်ကျိုးသွားပြီး၎င်းကိုပြန်လာရန်စောင့်နေလိမ့်မည်။ ကျန်းမာသောသော့ခတ်နိုင်သည့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းယန္တရားများ!
Will: နေ့စွဲကကောင်းကောင်းမွန်မွန်သွားပြီး၊ ငါခရီးလှည့်လည်ရတယ်၊ အိမ်ရှင်မတွေနဲ့တွေ့တယ်။ ပုလင်းတစ်လုံးနဲ့ဝိုင်တစ်ဝက်လောက်ပြီးသွားတယ်။ ငါတို့တွင်တူညီသော Ikea ဗီရိုရှိသည်။
ဂျက်: ကောင်းပြီ၊ ဒါကငါတို့ရဲ့ဒုတိယမြောက်နေ့ရက်ဖြစ်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် Will ကအေးဆေးအေးဆေးနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့တူတယ်။ ဘယ်သူအနာဂတ်လဲဆိုတာဘယ်သူသိလဲဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးကလပ်ကိုနိုင်မယ်လို့ငါထင်တယ်။
Will: တစ် * သုံးရက်မြောက်ရက် * ကိုအဆိုပြုထားသည်။
Shey, လစ်ဘရယ်ဝိဇ္ဇာနှင့် Rhys, နိုင်ငံရေးစီးပွားရေး
မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူ tinder စကားပြောဆိုမှုကိုစတင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
Shey: ကောင်းလိုက်တာ! ကျနော်တို့အများကြီးပြောခဲ့တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာနည်းနည်းလောက်အချိန်ကြာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူက Zoom ပေါ်မှာဖြစ်လို့ပါ။
Rhys: အတော်ကောင်းပါတယ်၊ ငါတို့ဟာကလစ်နှိပ်လိုက်မိသည်၊ သို့သော်အခြားအရာများထက်ပိုပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောခင်မင်ရင်းနှီးမှုအဆင့်တွင်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်
လူကိုယ်တိုင်အစား Zoom ပေါ်တွင်ရက်စွဲတစ်ခုရှိခြင်းသည်ထူးဆန်းသလား။
ဟေ့။ တခါတရံမှာငါတို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကိုပယ်ပစ္စည်းပစ္စယဖြတ်ချင်ပါတယ်။
Shey: Vibe ကခင်မင်ရင်းနှီးတယ်လို့ခံစားရတယ်၊
Rhys: သူမဟာတကယ်ကိုကောင်းပြီးကျွန်မတို့မှာဘုံအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေချိန်မှာကျွန်မရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေအများကြီးသဟဇာတဖြစ်မှုကိုငါမသေချာဘူး၊ ငါသော်လည်း, အနာဂတ်အတွက်သူမ၏ကံဆန္ဒရှိချင်ပါတယ်!
Hamish, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့် Yasmine, ဥပဒေ
Hamish: အသိဉာဏ်နှင့်လွယ်ကူသော - သွား။
Yasmine: တော်တော်လေးကောင်းတယ်၊ ငါသူ Hippie Jack Sparrow လိုထင်ရပေမယ့်နည်းနည်းကောင်းတယ် (သူ့ကိုမပြောနဲ့)
ဟာမစ် - ၃ နာရီကြာမရပ်မနားစကားပြောခြင်းဟာတစ် ဦး တည်းသာခံစားသလိုခံစားရတယ်။
Yasmine: ဒီအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်အရမ်း ၀ မ်းသာမိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အရာရာအကြောင်းအရာအားလုံးအကြောင်းကျွန်တော်တို့သုံးနာရီကြာစကားပြောဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒါဟာအဆင်မပြေဘူးလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး၊ တစ်ခါတစ်ရံခေတ္တရပ်နားခြင်းများရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်တူညီသည့်အရာများစွာရှိပြီးကွဲပြားခြားနားမှုများစွာရှိခဲ့သည်။ နက္ခတ္တဗေဒ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေး၊ စသည်တို့
ဟာမစ် - အစပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းကောင်းတယ်။
Yasmine: ကွန်ဖရင့်တစ်ခု (သို့) တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတခုမှာငါလိုခံစားခဲ့ရတယ်။ Zoom ဆက်သွယ်မှုအများစုသည်အစည်းအဝေးများ၊ သင်ခန်းစာများ၊ ပိုမိုပညာရေးနှင့်လေးနက်သောအရာများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Zoom ကိုရက်စွဲတစ်ခုထားခြင်းသည်ဤကဲ့သို့ပင်နည်းနည်းသာပုံရသည်။ ထို့အပြင်၊ ပရောပရည်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အပြုအမူသက်သက်ဖြစ်သောကြောင့်ပရောပရည်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲသည် - အသွင်အပြင်၊ ထိတွေ့မှု၊ အပြုံးများလဲလှယ်ခြင်းနှင့်ဤသိမ်မွေ့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင်လက်တွေ့ဆက်သွယ်မှုတွင်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အဲဒီလူကကျွန်တော့်ကိုစိတ်ဝင်စားလားဆိုတာကိုသိဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။
ဟာမစ် - ဟုတ်တယ်။
Yasmine: ငါမထင်ကြဘူး။ ငါအစားချိန်းတွေ့မိတ်ဖက်၏အစားမိတ်ဆွေတစ် ဦး လုပ်။ ငါနှင့်အတူပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
King's Going Dating အတွက်လျှောက်လွှာများကိုယခုပိတ်ထားသည်ဖြစ်သော်လည်းလာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ထပ်မံ၍ ပွဲများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထိတွေ့ရတော့မည်ဖြစ်သည့်အတွက်သတိထားပါ။
• King's မှကျောင်းသားများအတွက် Covid-19 စစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
• ကျနော်တို့က 'Big Clit စွမ်းအင်' 'Instagram ကိုစာမျက်နှာနောက်ကွယ်မှဘုရင့်ကျောင်းသားအားမိန့်မြွက်တော်မူ၏
•ယခုပင်လျှင် King's ၌အကြီးမားဆုံးလေ့လာနေသည့် YouTubers နှင့်တွေ့ဆုံပါ
လူစီဖာ၏ရာသီငါးသည် 'ပိုမိုဖရိုဖရဲ'၊ 'ထူးခြားဆန်းကြယ်သော' နှင့် 'ယခင်ကထက် ပို၍ ချိုသည်' သည်။
Freshman ဝက်အူ: အဖြစ်မှန် vs. မျှော်လင့်
စစ်မှန်တဲ့ American Horror Story ပန်ကာသာ ၁၃/၁၅ ဒီ Freak Show ပဟေinိမှာရလိမ့်မယ်
Gigi Hadid ကသူမ၏တိုက်ခန်း၏အတွင်းပိုင်းဓါတ်ပုံများကိုမျှဝေပေးပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုခေါင်းကိုက်စေသည်
အဆိုပါ '' ထွက်ကူညီဖို့ထွက်စား '' အစီအစဉ်အကြောင်းကိုဤ 21 memes စိတ်ကူးသူ့ဟာသူကဲ့သို့ရိုင်းဖြစ်ကြသည်
Love Island မှ Marcel သည် Gabby သည်ရာစုနှစ်၏အကြီးမားဆုံးကြံစည်မှုလှည့်ကွက်၌သူ့အားလိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်ဟုပြောဆိုနေသည်
snowtinis ကနေပူ chocs ရန်: ကျနော်တို့ Cardiff ရဲ့အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်အချိုရည်ကိုရှာဖွေသွား၏